Imaraadka carabta oo gar-gaar gawaari ah ku wareejiyey Koonfur Galbeed [SAWIRO] | Gaaloos.com
Home » News » Wararka » Imaraadka carabta oo gar-gaar gawaari ah ku wareejiyey Koonfur Galbeed [SAWIRO]
Imaraadka carabta oo gar-gaar gawaari ah ku wareejiyey Koonfur Galbeed [SAWIRO]
Safiirka Dowladda Imaaraadka carabta Soomaaliya u fadhiya Maxamed Axmed al-Cuthman ayaa maamulka kumeel-gaarka ah ee Koonfur Galbeed, Soomaaliya ku wareejiyey 10 gaari oo ah deeq ay bixisey UAE.
Furayaasha gawaarida Imaaraadku ugu deeqay koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu wareejiyey Madaxweynaha kumeel-gaarka ah ee maamulkaas SHariif Xasan Shiikh Adam.
Danjire Maxamed Axmed Cuthmaan oo ugu horeyn saxaafadda kula hadlay Xarunta safaaradda ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gaadidka maanta ay ku wareejiyeen Maamulka Kooofur galbeed uu qeyb ka yahay taageerada Dowladda Imaaraadka Carabta ay la garab tagaantahay Dowladda Federaalka ah ee Somaaliya iyo Dowlad Goboleedyada dalka kajira.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa uga mahadceliyay Dowladda Imaaraadka Carabta gaadiidka ay ku wareejisay oo uu sheegay inay wax weyn ka tari doonaan tayeynta iyo dib y dhiska Ciidanka Koofur Galbeed.
Safiirka Imaaraadka Carabta ayaa ahaa danjiraha keliya ee ka socda beesha Caalamka ee booqdey Kismaayo markii lagu kala kacay shirkii Wadatashiga Qaran, waxaana weli uu wadaa dedaal ku aadan in shirka dib la isugu soo noqdo.
Title: Imaraadka carabta oo gar-gaar gawaari ah ku wareejiyey Koonfur Galbeed [SAWIRO]